၁၀၀ ရာနှုန်းပြည့်ကျန်းမာသောလှုပ်ရှားမှု - သင်ကချင်နှစ်သက်သောဂီတ။ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
The အကနှင့်အတူပါဝင်သည်ဖြစ်ကြောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကို။ လူမှုရေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်တွင်။
ကန ဦး မေးခွန်း၏အဖြေကြောင်းလျှင် မင်းကကကြိုက်တယ်ပျော်တယ် ဘဝ၏အကြီးအပျြောအပါးတစ်ခု။ တစ် ဦး တည်းအနေဖြင့်၊ အားလုံးအတွက်ဖြစ်စေ၊ အုပ်စုလိုက်ဖြစ်စေအကအတွက်, အရသာအားလုံးအတွက်စည်းချက်များရှိသည်။ သမားရိုးကျမှအရှိဆုံးစမ်းသပ်နှင့်ရဲရန်။
Flamenco သည်စပိန်တွင်လူကြိုက်များသည်၊ ထို့အပြင်အမျိုးသားရေးနယ်နိမိတ်အပြင်ဘက်၏ဟူသောဝေါဟာရကို စပိန်အက.
၁၆ ရာစုကတည်းကအလွန်ရေပန်းစားသောစပိန်ရစ်သမ်နောက်တစ်နည်းမှာစီးပွါးရေးရေလွှမ်းမိုးခြင်းကြောင့်ယခုပြတိုက်အဖြစ်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်သော်လည်း နှစ်ဆင့်.
ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏ခေတ်ကဂီတမျိုးစုံကိုပြည်သူလူထုနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေပြီး၎င်းသည် danceable ရစ်သမ်များသိသိသာသာတိုးလာခဲ့သည်။ ရွေးချယ်စရာများသည်အပြင်းထန်ဆုံးသောကျောက်ဖြင့်စတင်သည်။ သံသယဝင်သူတွေရှိပေမဲ့၊ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးလေ့ကျင့်ထားသော "အုပ်စုအကများ" တစ်ခုဖြစ်သည်; နှင့်ဤသူတို့၏ခြေလှမ်းများကိုမဆိုသိသာအမိန့်မရှိဘဲ, မတရားခုန်ကန့်သတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်း။
တူညီသောထိုကဲ့သို့သော Ska ကဲ့သို့သောအမျိုးအစားများနှင့်ရက်ဂေး၏အခြို့သောရှုထောင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အဖြစ်လူသိများဂီတနေစဉ် pop ဂီတ, အ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် ယနေ့တိုင်အောင်ရှိ၏ စင်ကြယ်သောကွက်. The Backstreet ယောက်ျားလေးများ, ဂျက်စတင်ဘီဘာ y ဘရူနိုမားစ်၊ ဤရွေ့ကားအကအခုန်ကြံဆတီထွင်မှုမထင်ထားနိုင်အောင်, ကောင်းစွာပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောခြေလှမ်းများဖြစ်ကြသည်။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်၊ Justin Timberlake သို့မဟုတ် Justin Bieber မတိုင်မီတွင်၊ ဒစ္စကိုဂီတပြီးသားယင်း၏အမှုကိုပြုလေပြီ; နှင့်နောက်လိုက်များ Legion နောက်ကွယ်မှထွက်ခွာ။ ယနေ့လူများစွာသည်သူတို့၏ခြေရာကိုတုပကြသည် ဂျွန်ထရာဗိုလ် en အဖျားစနေနေ့ည.
ကာရစ်ဘီယံ၏ရစ်သမ်သည်ကခုန်ခြင်းနှင့်တူသည်။ reggaeton အပြင်, salsa နှင့် meringue မှတဆင့်သွားပါ။ ကိုလံဘီယာ cumbia နှင့် Calipso အပြင်“ el danzón” နှင့် el son cubano ကဲ့သို့သောအခြားသူများလည်းရှိသည်။ အများဆုံးရင်ခုန်စရာ, ဒါမှမဟုတ်သိမျးပိုကျတဲ့အစီအစဉ်၌နေသောသူအဘို့, "ကိုယ်ခန္ဓာမှခန္ဓာကိုယ်" ဟု bolero တစ်ခုကခုန်ခြင်းသည်မမှားယွင်းနိုင်သောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သေချာတာပေါ့, နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကခုန်ဖို့ဘယ်လိုသိအဖြစ်။
ပုံရိပ်ရင်းမြစ်များ - TravelJet / Frames
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ယဉျကြေးမှု » ဘယ်သီချင်းကိုသင်ကြိုက်လဲ?
Loafers: ဒီနွေ ဦး မှာဖက်ရှင်ဖိနပ်ကိုဘယ်လိုဝတ်ရမလဲ